▷ Ezona ndawo zinexabiso eliphantsi ze-aquariums ezingaphantsi kwe- € 50: izixhobo zokuqala | Ngeentlanzi
Kubo bonke abo baqala umhlaba wee-aquariums, i ii-aquariums ezingabizi kakhulu. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba ezi aquariums azisoloko zinomgangatho olungileyo ngokunxulumene nexabiso lazo. Kukwakho nemiba ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngokuxhomekeke kuhlobo lweentlanzi oza kuba nazo, umhombiso, inani leentlanzi, indawo ekhoyo, njl.
Ukuze usombulule konke oku kungaziwayo, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba zeziphi ezona ndawo zinexabiso eliphantsi kwimarike kwaye zeziphi kuzo ezinokuhlengahlengiswa kwiimfuno zakho.
1 Ezona ndawo zingcono ze-aquariums
2 Ubungakanani obuqhelekileyo bamanzi akwixabiso eliphantsi
2.1 Iilitha ezingama-60 zelwandle
2.2 Iilitha ezingama-100 zelwandle
2.3 Iilitha ezingama-200 zelwandle
3 Yintoni ekufuneka iqale ngekiti ye-aquarium engabizi
4 Ngaba kuyacetyiswa ukuba uthenge i-aquarium esezantsi efikelelekayo?
5 Apho unokuthenga khona ii-aquariums ezingabizi kakhulu
Ezona ndawo zingcono ze-aquariums
Nalu ukhetho lwee-aquariums ezilungileyo, ezintle nezinamaxabiso aphantsi:
Izikhumbuzo ezingapheliyo ze-KGS -...
Signstek - Idiphozithi ye ...
Ubungakanani obuqhelekileyo bamanzi akwixabiso eliphantsi
Ngaphambi kokuba uthenge i-aquarium ebiza ixabiso eliphantsi, kufuneka ukhumbule ukuba ayizizo zonke ii-aquariums ezinomgangatho ofanayo. Inobungakanani obahlukeneyo, ukusuka kwii-aquariums ezincinci ezingabizi kangako zeelitha ezili-10 okanye ngaphantsi, ukuya kwii-aquariums ezinkulu ezingabizi kakhulu ngeelitha ezili-100 okanye ngaphezulu.
Kwintengiso, unokufumana uninzi lwee-aquariums ezigqibeleleyo, kodwa azisoloko zinomgangatho owufunayo. Esi sesinye sezizathu zokuba kufuneka wenze uthelekiso ukuze ukhethe kwinani leetanki zentlanzi ezingabizi kakhulu kodwa ezisemgangathweni.
Iilitha ezingama-60 zelwandle
BETTASHOP.ES I-Aquarius ...
Ezi aquariums zilula kwabo batsha kweli hlabathi. Enye yazo irhasi iqala ezantsi kunye nokuhonjiswa okulula okungafuneki kubunzima obukhulu. Kuyimpazamo ukucinga ukuba ngokukhetha i-aquarium encinci uya kufuna ingqalelo encinci. Ulungiso lungaphezulu okanye lungaphantsi ngokufanayo, kuba kwi-aquarium eyi-60 L kuyakubakho uzinzo oluncinci kwaye ngenxa yoko siya kuba neemeko ezinzima ngakumbi zolondolozo.
Iilitha ezingama-100 zelwandle
Zithathwa njengezo zinobukhulu obuphakathi. Siyabulela kula mabukhulu ukuze sikwazi ukufumana umhombiso obanzi ngakumbi kunye nokucaciswa kwentlanzi ayisiyiyo kuphela emininzi kodwa ikwahluka ngokweentlobo. Gcina ukhumbula ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luya kuba phezulu kakhulu, kodwa akukho ngxaki yokufumana izixhobo. Isibonelelo kukuba ukugcinwa akufuneki ixesha elininzi kwenye yeeparameter ze-aquarium zihlala zihleli kwaye zilula ukuzigcina ngokuhamba kwexesha.
Iilitha ezingama-200 zelwandle
Ezinkulu okanye ezilinganayo kulo mthamo wamanzi zithathwa njengeendawo ezinkulu zasemanzini. Banezibonelelo ezinjengokwazi ukuba neentlobo ezinkulu, umhombiso Ubunzima ngakumbi kunye nenani elikhulu leentlanzi kunye neentlobo ngaxeshanye. Ihlala ineziphumo ezinomtsalane, nangona ingafanele ilibaleke ukuba yongeza ubunzima malunga nokusetyenziswa kwezixhobo kunye nokuqwalaselwa okukhulu. Gcina ukhumbula ukuba iintlanzi ezininzi onazo, kokukhona inkathalo iba nzima.
Yintoni ekufuneka iqale ngekiti ye-aquarium engabizi
Ukuzonwabisa kwe-aquarium kuye kwaduma kwiminyaka yakutshanje, njengoko ukufuya iintlanzi kuye kwafikeleleka ngakumbi. Oku ikakhulu kungenxa yokuba ixabiso lezinto ezifunekayo zokuqalisa liye lehla kakhulu. Oku akuthethi ukuba sithenga ii-aquariums ezikumgangatho ohlwempuzekileyo, kodwa imveliso iphezulu kwaye, njengoko kusenzeka kulo lonke uqoqosho lwesikali, xa imveliso iphezulu, ixabiso lokuthengisa liya kuba sezantsi ngenxa yokusebenza kakuhle.
Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka ujonge ngokucacileyo umgangatho wamacandelo ayo ngaphambi kokuba uthenge i-aquarium, kuba ekugqibeleni sidlala nezilwanyana eziphilayo. I-aquarium, ngaphandle kwexabiso layo, kufuneka ibe nayo yonke into oyifunayo ukuze uqalise:
Umququ we-Aquarium: Kubalulekile ukuba ikiti ye-aquarium enexabiso eliphantsi iqulethe i-urn aquarium. Le urn iya kuba nezinto ezinomgangatho ophakamileyo okanye osezantsi kuxhomekeke kwixabiso esizimisele ukulihlawula. Enye into ekufuneka uyiqwalasele bubungakanani. Ii-aquariums ezinkulu ziya kubiza ngaphezulu. Kufuneka silungelelanise le parameter kwiimfuno zethu.
Isibane: ukukhanyisa kubalulekile ukuba eyona njongo yethu kukuhombisa. Izibane ze-LED zezona zibalaseleyo ngokomhombiso kunye nokonga umbane. Ukubekwa kunye nokucwangciswa kwezibane ngumbandela wokungcamla.
Amacebo okucoca kunye neempompo: Kubalulekile ukuba ikiti ye-aquarium iqulethe izihluzo kunye neempompo zamanzi. Ziyimfuneko ukuba i-ecosystem isebenze ngokufanelekileyo ngaphakathi kwe-urn. Impompo yeyona inoxanduva lokumpompa amanzi ngaphakathi ukuze kubekho umjelo wamanzi, ngelixa isihluzo siso esinoxanduva lokucoca ukungcola.
Ukhetho: Ngokukhetha, ikiti ye-aquarium inokuzisa ukutya kwentlanzi, iimeko emanzini, isifudumezi, njl. Ezi zezinye izinto ezinganyanzelekanga kuzo zonke i-aquariums, kuba ubukhulu becala kuxhomekeke kuhlobo lweentlanzi esiza kuzinyanga. Ayizizo zonke iintlanzi ezinokutya okufanayo kwaye azidingi isifudumezi ukunyusa ubushushu bamanzi.
Ngaba kuyacetyiswa ukuba uthenge i-aquarium esezantsi efikelelekayo?
Xa uza kukhetha i-aquarium esetyenziswa ngesandla, njengakwezinye izinto ezizezesibini, kuya kufuneka ujonge imeko efumaneka kuyo. Ukuba imeko yolondolozo ilungile, inokusebenza ngokugqibeleleyo. Kukho abantu abakhathalele kakhulu ii-aquariums ngokuhamba kwexesha abanakufumana ukuthotywa. Kuya kufuneka uyazi ukuba i-aquarium isetyenzise ixesha elingakanani kunye nokuba loluphi uhlobo lweentlanzi oluzigcinileyo.
Kuyacetyiswa ukuba wenze ucoceko olunzulu ngaphambi kokuyisebenzisa kwakhona. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba iigaskethi ze-silicone zichanekile, ukuba akukho mingxunya mininzi kunye namaqhuma. Ukuba uza kuthenga icebo lokucoca ulwelo, kuyacetyiswa ukuba uyibone isebenza kwaye ayenzi zingxolo.
Apho unokuthenga khona ii-aquariums ezingabizi kakhulu
Siza kudwelisa uluhlu lweendawo apho unokuthenga khona ii-aquariums ezingabizi kakhulu ezikumgangatho olungileyo:
Amazon: KwiAmazon ungafumana inani elikhulu lee-aquariums ezingabizi kakhulu ngobukhulu obahlukeneyo. Inesiqinisekiso kwaye banothutho olulungileyo. Uyakwazi ukuba ne-aquarium yakho kwiintsuku nje ezimbalwa.
Kiwok: Inayo zombini ivenkile ebonakalayo kunye nevenkile ekwi-intanethi. Uncedo lwevenkile ebonakalayo kukuba unokubona emntwini ubungakanani be-aquarium kunye neempawu zayo. Oomabhalana banokukucebisa ukuba yeyiphi enokukufanelekela ngcono ukuba awuwuqondi kakuhle lo mbandela. Banamaxabiso amahle kwaye bakwanayo nevenkile ekwi-intanethi.
ZooPlus: Ivenkile enika ukhetho olukhulu lwee-aquariums, izixhobo kunye nokutya kwentlanzi. Ivenkile ye-intanethi apho unokufumana yonke into oyifunayo kwii-aquariums. Unokufumana kwakhona izihluzi kunye neempompo zamanzi.
Indlela enqamlezileyo: Apha unokufumana iintlobo ezininzi ze-aquariums kwiivenkile zomzimba nakwi-intanethi. Le hypermarket inecandelo elinikezelwe kuphela kumxholo wee-aquariums, ke unokufumana yonke into oyifunayo malunga noku.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-aquariums ezingabizi kakhulu kunye nento omele uyithathele ingqalelo ukuze ukhethe umgangatho olungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Ama-aquariums aphantsi